कसरी चिन्ने सेक्सका अत्यन्तै भोका महिलाहरु ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडौँ । अक्सर महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । यो मान्यता संसारभरीका महिलामा लागु हुन्छ । प्राय महिलाहरुले थोरै बालेर धेरै भनेका हुन्छन् । सामान्य तरिकाले भन्दा पनि महिलाको शरिरको हाउभाउले धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले आफ्नो यौन चाहान शब्दमा कहिलै ब्यक्त नगर्ने कुरा एक अध्यानले देखाएको छ । यहाँ मलिालाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको बेला देखाउने ब्यवहार यस्ता छन् ।
महिला अनपेक्षितरुपमा तपाईको शरीरको सामिप्यतामा आउन खोजिन् वा तपाईलाई छुने बहाना खोजिन् भने बुझ्नुस् उनलाई यौन चाहाना जागेको छ । महिलाहरु खुट्टाको बुढी औंलाले भूइँमा कोतर्न थाले भने पनि उनीहरुको चाहाना बुझ्नु पर्छ । कतिपय स्त्रीहरु च्याटमा त्यस्तै खालका साइन पठाउने वा फोहोर कुरा गर्ने गर्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस यौन सम्पर्कबाट श्रीमती सन्तुष्ट भए नभएको कसरी थाहा पाउने ?
१०,जेष्ठ.२०७६,शुक्रबार १०:५० मा प्रकाशित
← नेपाली भूमिमा क्षति पुर्‍याएर भारतमा सडक निर्माण
नेपालमै भारतीयको घेरामा सांसद →